NomNoms! Android ကိုသူတို့ရဲ့ bug တွေကိုချစ်မြတ်နိုးလာစေတယ် Androidsis
NomNoms! HyperBeard စတူဒီယိုမှဂိမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် အခြားအရာ ၀ တ္ထုများကိုမူကား၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုနှင့်အရာဝတ္ထု၏ရူပဗေဒတွင်ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုများမရှိသောအခြားအဖြစ်အပျက်များကိုရေချိုးရန်အတွက် Android သို့လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ pinball တစ်ယောက်လိုလိုပေါ့။
pinball ဟုပြောပါကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည် သူတို့အား Noms ပစ်ရန်လောက်လွှဲကိုသုံးပါ သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီအဆင့်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်နှင့်အတူတိုက်မိနိုင်အောင်။ အချို့သောအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသတ္တဝါများကို Noms နှင့်လိုက်ပါပြီးအဆင့်တိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်နေသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဥများ၌တွေ့လိမ့်မည်။
1 တစ် ဦး ကအကြီးအ Nomgame!
2 NomNoms လို့ခေါ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာထဲကျဆင်းသွားနိုင်တဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပေါ့။
3 အဆိုပါဇာတ်ကောင်အဖြစ် Noms
တစ် ဦး ကအကြီးအ Nomgame!
NomNoms! ၎င်းသည်ပေါ့ပါးသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်သည်များစွာသောအဆင့်ကိုသင်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ဒီအဆင့်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်တူနီးပါးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားရင်သင်မှားသွားတယ် သင်စတင်တိုင်းအချိန်တိုင်း HyperBeard ကောင်းစွာစမ်းသပ်ခဲ့သည် ရွှေဒင်္ဂါးများနှင့်ထိုဥများကိုရရှိရန်အသစ်တစ်ခုကိုသင်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ထိုစပ်စု။ ချစ်စရာကောင်းသော Noms တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။
ဒီအတွက်ငါတို့ရှိသည် ညာဘက်အောက်ခြေမှာလောက်လွှဲ အရာဝတ္ထုများ၊ အဆောက်အအုံများ (သို့) ဒင်္ဂါးများကိုစုဆောင်းရန်အတွက် Noms ကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိမ့်မည်။ ဒီအဆင့်သာမကအဆင့်တစ်ခုစီမှာအရင်ကထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုများနေတယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေရန်ကွဲပြားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါလိမ့်မယ်။
Nomaသို့သင်မည်သို့သွားနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပါမည် သွေးခုန်နှုန်းအထူး catapult မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းညွှန်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Nom သည်ဝေးလံသောဒင်္ဂါးပြားသို့ရောက်ရှိရန်ခွင့်ပြုပေးသောစီးရီးများအတိုင်းလိုက်နိုင်ရန်အခြားတစ်နေရာသို့ရောက်ရှိသွားသည်။
ယခုထိကျွန်ုပ်တို့မတွေ့သေးပါ အမြှောက်နှင့်ရိုက်ချက်များအကန့်အသတ်ရှိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဟာအရမ်းကောင်းလို့သူတို့ကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ပဲ။ ထိုခက်ခဲသောနေရာများသို့ရောက်ရှိရန်သင့်တွင်ကျွမ်းကျင်မှုအနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်များတွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည့်အတိုင်းအရာအားလုံးကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများရှာမတွေ့မချင်းစမ်းသပ်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။
ကျနော်တို့အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်အဖြစ်ကျွန်တော်တစ် ဦး ချင်းစီအဆင့်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ကိုအုန်းသီးအနည်းငယ်ကိုစားခိုင်းတယ် ငါတို့သည်သစ်သားပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုထိလျှင်သို့မဟုတ်ဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းကိုထိရန် Nom အတွက်အချိန်ကာလစောင့်ဆိုင်းလျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ NomNoms! ၎င်းတွင်ကြီးမားသည့်အရာဝတ္ထုရူပဗေဒရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအဆင့်ကိုပြီးအောင်ပြီးအခြားသို့သွားရန်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများရှာဖွေရန်။ တစ်ခုချင်းစီ၏မူရင်းကြောင့်၎င်းသည်အကျင့်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
Un ငါအရမ်း kawai ကစား ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်အသံဂိမ်းများကိုထုတ်ဝေသည့်မက်ဒရစ်စတူဒီယို Platonic Games မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သိရန်ဖြောင့်သွားပါလိမ့်မယ် သငျသညျချိတ်နိုင်စွမ်းသောသူတို့၏အမျိုးအပေါ့ပေါ့တ ဦး တည်း ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအချိန်ကိုတိုင်းတာခြင်းမရှိဘဲအဆင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်သန်းသွားရန် ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကစားနေသောအချိန်အတွက်၎င်းသည်များစွာကတိပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်နောက်တစ်ခုမှာ Noms အားလုံးကိုစုဆောင်းရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်ပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုမြင်နိုင်ရန်ထိုဖန်သားပြင်သို့သွားနိုင်သည်။ အားလုံးဂိမ်းတစ်ခုရင်ဆိုင်ခြင်း၏တစ် ဦး ယဉ်လမ်းနှင့်အတူရာသီ အရောင်တွေအများကြီးရှိပြီးပထမမိနစ်ကနေမျက်လုံးတွေထဲကို ၀ င်လာတယ်။ Play Store တွင်အောင်မြင်သောစတူဒီယိုတစ်ခုမှဖန်တီးထားသောဂိမ်းတစ်ခုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည်။ သူ့နေ့က ကျနော်တို့ KleptoCats ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြီ, အကြီးအရောင်အခြားဂိမ်း။
နည်းပညာပိုင်းအရသူသည်အလွန်ကောင်းသောအမြင့်တွင်ရှိသည် ၎င်းသည်၎င်း၏ကြီးမားသောအရောင်များ၊ အဆင့်အတန်းများတီထွင်နိုင်မှု၊ အရာဝတ္ထုများ၏ရူပဗေဒနှင့်၎င်း၏ဇာတ်ကောင်များ၏ဒီဇိုင်းအပြင်အသံနှင့်အခြားအရာများအတွက်ထင်ရှားသည်။ ၎င်းဗီဒီယိုဂိမ်းစတူဒီယိုက၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမည်မျှကောင်းကောင်းသိသည်ကိုပြသပြီး၎င်းကိုပြသထားသည့်ဂိမ်းတစ်ခု။
NomNoms! အောင်မြင်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ Android ကို Android အတွက်ပါ ပြီးတော့မင်းကအရမ်းအေးပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့အဲဒီဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ချစ်ကြတာပါ။ အရောင်များစွာနှင့်အတူများစွာသောအဆင့်ဆင့်ရင်ဆိုင်ရဖို့အဆင်သင့်နှင့်အလွန် kawai ဖြစ်ကြသည်။
ကန့်အသတ် hits ဖြစ်ကြပါစို့
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » NomNoms! ၎င်းသည်သင်မလွဲမရှောင်သာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ ပါရမီနှင့်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Xiaomi Mi 9T နှင့် Mi 9T Pro တို့၏ပထမဆုံးဓာတ်ပုံများကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရသည်